एक पोटि लसुनले मिल्छ कयौँ रोगबाट मुक्ति - Himalayan Kangaroo
एक पोटि लसुनले मिल्छ कयौँ रोगबाट मुक्ति
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ माघ २०७१, शनिबार १४:२३ |
लसुन बाह्रै महिना खानको लागि राम्रो मानिन्छ भने परिकारलाई मिठो बनाउन पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।
स्वास्थ्यको लागि लसुन निकै फाईदाजनक हुन्छ । सर्दिको लागि पनि लसुन उपयुक्त मानिन्छ । कतिपयलाई लसुन मन नपर्न पनि सक्छ । तर तपाईले सधै एक पोटि लसुन खानु भयो भने शरीरलाई धेरै किसिमको फाईदा हुन्छ । लसुनका केहि फाईदाहरु ।
पिंपल्स : लसुनले पिंपल्स र पिंपल्सको दाग हटाउन सहयोग गर्छ । यसका लागि लसुनको एक पोटिलाई रगटेर रस निकाल्नुहोस । उक्त रसलाई पिंपल भएको ठाउँमा लगाउनुहोस र ५–६ मिनेटसम्म राख्नुहोस । त्यसपछि चिसो पानिले धुनुहोस । केहि दिनमा यसको असर देखा पर्न थाल्छ ।
लामो कपाल : लामो अनि बाक्लो कपालो लागि लसुन उपयुक्त उपाय हो । लसुनको रस तपाईले प्रयोग गर्ने श्याम्पु अथवा कन्डीस्नरमा मिसाएर लगाउनुहोस । उक्त विधि दुई पटक अपनाउनुहोस । दुईपटक भन्दा बढी प्रयोग गरेमा तपाईको कपाल ड्यामेज हुनसक्छ ।
मोटोपन : नियमित लसुन खानाले वजन घटाउन मद्धत गर्छ । किनकी यसले शरीरमा हुने वोसो घटाउन सहयोग गर्छ ।
ब्लड प्रेशर : लसुनमा एक प्रकारको प्रोटिन हुन्छ जसले हाम्रो रक्त सञ्चारमा हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्छ । यसमा हाईड्रोजन सल्फाईडले रक्त धमनीलाई फैलाउन मद्धत गर्छ र ब्लड प्रेशरलाई कंट्रोल गर्छ ।
सर्दी : लसुनमा इंफ्लामेट्री तत्व हुन्छ जसले एलर्जी हुनबाट रोक्छ । मौसम परिवर्तनका कारण जुनसुकै उमेरका मानिसहरुलाई सर्दीको समस्या उत्पन्न हुन्छ यस्तो अबस्थामा लसुनको काँढा पिउनुहोस ।
क्यान्सर : लसुन क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोगसंग लड्न मद्धत गर्छ । यसले क्यान्सरविरुद्ध लड्न सक्ने प्रतिरोधात्म क्षमता बढाउँछ । र शरीरमा बढ्ने क्यान्सरलाई रोक्छ ।
प्रेग्नेंसी : गर्भवती महिलाको लागि लसुन खानु एकदमै फाईदा हुन्छ । प्रग्नेन्सीको समयमा रक्तचापको समस्या छ भने कुनै न कुनै तरिकाबाट लसुनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
Previousयातायात भाडा घटाउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम
Nextएनआरएन ओसिनियाको क्षेत्रीय बैठकमा के के भए ?
यक्ष प्रश्न :भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध देशका लागि कि दलका लागि ?
७ भाद्र २०७३, मंगलवार १४:५०
हाम्रा महिलाहरू सुरक्षित स्यानिटरी प्याडको अभावमा कति पीडाबाट गुज्रीरहेका होलान् : डा. भट्टराई
१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०४:५५
ठूला माछा भर्सेज साना माछा
८ पुष २०७१, मंगलवार ०२:१२
सपनाहरुको हत्या , आत्महत्या !
१ असार २०७४, बिहीबार ०४:१८
ईङ्लिस प्रिमियर लिग : अग्युरोको गोल, म्यानचेस्टर सिटी विजयी